मार्च अर्थात् महिलाको महिना |
मार्च अर्थात् महिलाको महिना
प्रकाशित मिति :2019-03-06 15:58:08
अहिले तीनै तहका स्थानीय सरकारमा महिलाहरु सहभागी छन् । तर, यो सन्तोषजनक सहभागिता होइन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाहरु निर्णायक ठाउँमा जस्तै देखिन्छन् । निर्णायक प्रक्रियामा महिलालाई सहभागी नगराईनु, सहभागी भएपनि उनीहरुका कुरालाई ध्यान नदिनु सामान्य जस्तै मानिन्छ ।
तर, प्रश्न गरिन्छ, यत्ति धेरै महिलाहरु संसदमा पुग्दा के नापे ? खै त महिलाले के गरे ? पद त दिएकै हो नि गर्न केही सके र ? यस्ता जिज्ञासा सुन्दा मलाई दिक्क लागेर आउँछ ।
घरमा बिहानको घामको उदय भन्दा महिलाको दैनिकी छिटो सुरु हुन्छ । महिलाका लागि सुर्य पनि छिट्टै उदाउँछ । तर सोचिन्छ, त्यो छिट्टै उठेर गरिने काम ‘काम’ नै हैन । घरको काम त काम जस्तै मानिदैन । अहिलेको महिला आन्दोलन र महिला दिवस त यहीँबाट सुरु हुन्छ, आफ्नै घरबाट ।
घरमा श्रीमानले श्रीमतीलाई भान्छामा के सघाउँ भन्दैन । बच्चा बिरामी हुँदा बच्चाको ख्याल पुर्ण रुपमा श्रीमतीले नै हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा राख्छ । चिया श्रमतीले पकाएर दिए हुन्थ्यो, कपडा धोई दिएहुन्थ्यो । अनि, कुचो लगाउने, घरधन्दा गर्ने सबै सबै काम महिलाले नि गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा श्रीमानको हुन्छ ।
त्यति मात्रै हैन श्रीमती घर बाहिर कार्यालयको काम पनि भ्याओस् । १० बजे कार्यालय पुगोस् ५ बजे काम सकेर, उज्यालैमा घर आईदेओस् । त्यसै गरि घरको काम पनि गरिदेओस् । धेरै श्रीमानहरुले श्रीमतीका बारेमा यस्तै सोच्ने गर्छन् । यसरी त कसरी हुन्छ र ?
जिम्मेवारी थपियो तर सहयोग गर्ने मान्छे थपिएनन् । महिलाको घरभित्रको कामलाई ‘काम’ मान्ने मान्छे नै भएनन् । काम भनेको कार्यलयको मात्रै हो, घर भित्र भान्छामा गरिने त काम नै हैन ? जबसम्म यसरी बुझिन्छ तबसम्म महिलाको जीवन सहज हुँदैन ।
यसरी त अबसरको नाममा महिलालाई झनझन् धेरै गाँजिएको देखिन्छ । घरमा खाना पकाउ महिला, छोराछोरी हेर महिला, कपडा धोउ महिला, बिरामीलाई हेरचाह गर महिला, कसैको विवाह व्रतबन्ध भयो महिला, पुरुषले पनि त यसमा सहयोग गर्नुपर्यो नि !
श्रीमती घर बाहिर कार्यालयको काम पनि भ्याओस् । १० बजे कार्यालय पुगोस् ५ बजे काम सकेर,
उज्यालैमा घर आईदेओस् । त्यसै गरि घरको काम पनि गरिदेओस् । धेरै श्रीमानहरुले
श्रीमतीका बारेमा यस्तै सोच्ने गर्छन् ।
अब महिला हरेक ठाउँमा सहभागी हुन थालिसकेका छन् । महिलालाई ‘बिचरा’ भन्ने दृष्टिकोणबाट बाहिर निकालिनुपर्छ । ‘बिचरा’ त पुरुष पनि छन् । ग्लोबल प्रतिस्पर्धाको समय छ । विश्वमै तुलना गर्ने हो भने पनि महिलाहरु प्रतिस्पर्धाको बजारमा छन् ।
अब पुरुषहरु पनि आफ्नो पुरातनवादी सोचबाट बाहिर अाउनुपर्छ । घरको काम श्रीमतीको मात्रै हो भन्ने सोच्न भएन । घरमा मिलिजुली काम गरे पो घर ‘घर’ जस्तो हुन्छ । पस्केको खाना खाएर, खाएको थालमा हात चुठेर हिँड्यो भने कहाँ हुन्छ त ?
नेपालमा मार्च ८
सन् १९८२ तिरको कुरा हो, मलाई अहिले पनि याद छ, त्यतिबेला स्थानीय विकास मन्त्रालयमा महिला विकास शाखा थियो । त्यही एउटै कोठा भित्र हामी महिला दिवस मनाउँथ्यौं ।
अहिले सन् २०१९ सम्म आइपुग्दाको महिला दिवसको महत्व फेरियो । महिलाका मुद्दाले केही मात्रामा ठाउँ पाए । महिला शाखाको एउटा सानो कोठाबाट परिवर्तन भएर मन्त्रालयमा पुगेका छौँ ।
महिलाका पक्षमा धेरै कानुनहरु पाएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छौँ । हाम्रा अधिकारहरु नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ । महिलामाथिको विभेद रोक्नलाई प्रतिबद्ध छु भनेर हस्ताक्षर गरेको छ ।
यो मार्च ८ भनेको, महिलाको महिना हो । सरकारले महिलाका पक्षमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुराहरुको बारेमा सरकारलाई प्रश्न सोध्ने, झक्झकाउने, सरकार अब यस्तो बाँकी छ, यस्तो भन्या छ कागजमा भनेर अझ दबाब दिने महिना हो ।
एक ठाउँमा भेला हुने । अब महिलाका यो अधिकारका कुरा महिलाका मात्रै भएन । जब देशको ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएको एउटा लिंग खुसी हुन सक्दैन तब कसरी देशको विकास हुन्छ ?
जबसम्म महिलाले आफ्नो अधिकार पाएको महसुस गर्दैनन् समृद्ध नेपालको नारा कसरी साकार हुन सक्दैन ? जबसम्म एउटी महिला ढुक्कले हिँड्न सक्दिनन्, निदाउन सक्दिनन् त्यहाँ कसरी सुन्दर सपनाहरु बुनिन्छन् ? यसमा त के महिला के पुरुष सबैले सोच्नु पर्ने हैन र ?
(अधिकारकर्मी जोशीसँग महिला खबरले गरेको कुराकानीमा आधारित)